Iprofayile yenkampani-Yuyao Xianglong yoNxibelelwano loMzi mveliso we-Industrial, Ltd.
I-Yuyao Xianglong yoNxibelelwano yeMizi-mveliso Co, Ltd. yasekwa ngo-2005, ibekwe e Yuyao, Ningbo, kwiPhondo Zhejiang. Ngokukodwa ngokukodwa kwimveliso yeefowuni zonxibelelwano zomkhosi kunye nezomkhosi, izibeleko, iphedi yamaqhosha kunye nezinto ezinxulumene noko. With14 iminyaka 'uphuhliso, iye 6,000 square metres izityalo imveliso kunye nabasebenzi 80 ngoku, nto leyo enesakhono kuyilo imveliso yoqobo, uphuhliso ekubumbeni, inkqubo ziphene sukube, processing metal Ukuhlukunyezwa processing, mechanical processing yesibini, ibandla kunye neentengiso phesheya. Ngaphantsi koncedo lweenjineli ze-R & D ezinama-8, singenza ngokwezifiso iifowuni ezahlukeneyo ezingekho mgangathweni, iphedi yamaqhosha kunye nokuzalwa kwabathengi ngokukhawuleza.
Ngomasifundisane wethu wokubumba, umasifundisane wokubumba inaliti, umlinganiso wesinyithi wokubetha ifreyim, umasifundisane osetyenziselwa ukungcola intsimbi, ucweyo lokuqhubekeka ngocingo, sivelisa izinto ezingama-70% ngokwethu, eziqinisekisa umgangatho kunye nexesha lokuhanjiswa. Kwaye sazise i-graphic analyzer yamaqhosha, ukusebenza komvavanyi wobomi, umvavanyi we-elastic, ityiwa yokuvavanya ityiwa, isitshixo sokujonga, ukutsala amandla omvavanyi, umvavanyi wezomkhosi ophezulu kunye nobushushu obuphantsi, umvavanyi wokulahla, umgangatho wehlabathi we-electroacoustic index tester, njl, ukuqinisekisa ubuchwephesha iimfuno kunye nemigangatho ziyahlangabezana neemfuno ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ukuze kukhuthazwe ukhuphiswano lwenkampani, inkampani iqhube imisebenzi yolawulo ye-6S, imisebenzi yolawulo lwemveliso, imveliso yokuphucula umgangatho, ukuphuculwa kwemishini, inkqubo yezabasebenzi, inkqubo yenkcubeko kunye neminye imisebenzi yokuphucula umgangatho kunye nokusebenza kakuhle kule minyaka idlulileyo. Iyiphucule indibaniselwano kunye nomdla kubo bonke abasebenzi kwaye idlale into ebanelisa kakhulu.
Ukuthatha ukubonelela ngokuthembekileyo, ubuncwane bezitshixo zomkhosi kunye neziphatho zomkhosi kunye neziphatho zomnxeba njengemishini yenkampani yethu, sigxila ekubeni yinkokeli yehlabathi kwizitshixo zeshishini nakwiziphatho zonxibelelwano ngomnxeba. Ngenxa yokuzincama, ubukrelekrele, ubukrelekrele, umzabalazo, intsebenziswano kunye nexabiso lezinto ezintsha kunye nokusukela ukugqwesa, sijolise ekubeni ngumnikezeli ngobungcali ohamba phambili kwizitshixo zeefektri nakwiziphatho eziphathwayo kwimakethi yehlabathi. Siyakholelwa ukuba sizakufezekisa iinjongo zethu kwaye sinegalelo kuphuhliso lonxibelelwano lweshishini ngayo yonke imizamo!
No. 21 yeNdlela eyaPhakathi yeGuoxiang Bridge iLanjiang Street Yuyao Zhejiang China
Ilungelo lokushicilela © 2019 I-Yuyao Xianglong Unxibelelwano lweMizi-mveliso Co, Ltd.